एकपटक कोभिड भएपछि पुनः संक्रमण कति समयमा हुन सक्छ? अर्घाखाँचीबुलेटिन
| २०७८ माघ २५ गते २०: ०७ मा प्रकाशित
एजेन्सी, २५ माघ । कोरोना भाइरस पुनः संक्रमणः कोभिड–१९ संक्रमण र कोरोना भाइरस यो जीवनको एउटा हिस्सा बनेको छ, तर यससँगै धेरै प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। यी मध्ये एउटा प्रश्न यो हो कि एक पटक संक्रमित भइसकेपछि दोस्रो पटक कति चाँडो संक्रमित हुन सक्छ ?कोभिड–१९ संक्रमण एसएआरएस–कोओ२ को कारणले हुन्छ, जुन एक अत्यधिक संक्रामक भाइरस हो भन्ने विश्वास गरिन्छ।
भाइरसले धेरै प्रकारका रूपमा हामीलाई आक्रमण गरिसकेको छ, र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टहरूको उदयलाई नकार्न सकिँदैन। साथै, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित सावधानी अपनाइएन भने यो संक्रमण फेरि हुन सक्छ । मास्क, हात सफा राख्ने र अरूबाट शारीरिक दूरी कायम राख्नु कोभिड–१९ को फैलावट रोक्न प्रभावकारी उपायहरू हुन्।
कोभिड–१९ बाट पुनः संक्रमित हुनुको अर्थ के हो?
जब एक व्यक्ति एक पटक भन्दा बढी भाइरसबाट संक्रमित हुन्छ, यसलाई पुनः संक्रमित भनिन्छ। कोभिड–१९ लाई निम्त्याउने भाइरस संग पुनः संक्रमण को अर्थ एक व्यक्ति संक्रमित भएको थियो, निको भयो, र पछि पुनः संक्रमित भयो। कोरोनाबाट निको भइसकेपछि धेरैले यो भाइरसबाट सुरक्षा पाउँछन्, तर फेरि कोभिडबाट संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ ।
कोभिड एक पटक पुनः संक्रमित हुन कति समय लाग्न सक्छ?
धेरै विज्ञहरूले प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पुनः संक्रमणसँग जोडेका छन्। एक व्यक्ति फेरि कति चाँडो यो रोगबाट संक्रमित हुन सक्छ भन्ने कुनै निश्चित जवाफ छैन। यदि तपाइँ संक्रमणको तीन महिना पछि पुनः लक्षणहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, परीक्षण गर्न निश्चित हुनुहोस्।
कोभिड–१९ बाट पुनः संक्रमणको सम्भावना किन ?
धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भईरहँदा, भाइरसले मानव जनसंख्यामा आफ्नो उपस्थिति महसुस गरिसकेको छ। मानिसहरूले कोविडसँग सम्बन्धित सावधानीहरूलाई बेवास्ता गर्न थाल्छन्, जसका कारण भाइरस द्रुत रूपमा फैलिन थाल्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सबै देशका सरकारसँगको सहकार्यमा कोभिड–१९ संक्रमणबारे सचेतना फैलाउने काममा निरन्तर लागिरहेको छ ।
एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तिहरूबाट पुनः संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यी ती व्यक्ति हुन् जसले भाइरस बोकिरहेका छन् तर तिनीहरूमा कुनै लक्षण देखा पर्दैन। कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको समयमा, जसको लागि Omicron सबैभन्दा जिम्मेवार थियो, यो प्रायः एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तिहरूद्वारा फैलिएको थियो।